डाक्टर भट्टराईलाई अमेरिकामा कालो झण्डा – Durbin Nepal News
नेपालको बैकमा रहेको पैसाको पनि अमेरिकामा ट्याक्स फाइल गर्नु पर्छ ? विजय अधिकारी, सिपिए
हलिउडको ओस्करमा कोरीयाली चलचित्रको वर्चश्व
अमेरिकाद्वारा चीनमाथि आफ्ना लाखौं नागरिकको गोप्य विवरण चोरी गरेको आरोप
भोली निर्वाचित भएर आउन सक्दिन भन्नेहरु चुनावको विरोधमा छन् : आनन्द बिष्ट
नेकपा अमेरिकामा दुई चिरा
थाइल्याण्डमा एक सैनिकद्वारा सामुहिक हत्या (मास सुटिङ), कम्तीमा २१ जनाको मृत्यु
डाक्टर भट्टराईलाई अमेरिकामा कालो झण्डा
दूरबिन नेपाल ३१ भाद्र २०७५, आईतवार ००:४३
अमेरिका १५ सेक्टेम्वर
एनआरएनएको सहयोगमा अमेरिका भ्रमणमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई शनिवार टेक्ससमा कालो झण्डा देखाइएको छ । १७ हजार नेपालीको हत्या गरिएको ‘माओवादी जनयुद्ध ‘ का योजनाकार भएको भन्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।
उनीहरूले बाबुराम भट्टराईलाई ‘जनहत्याका योजनाकार’ भन्दै अमेरिकाबाट फर्कन समेत भने । माओवादी जनयुद्धका कारण अमेरिकामा आएर शरण लिने नेपालीको सङ्ख्या करिब ३० हजार रहेको छ । सबै भन्दा बढी माओवादी पीडित क्यालिफोर्निया , न्यु योर्क र टेक्ससमा रहेका छन् । विरोधको बाबजुद पनि डाक्टर भट्टराईको नेपाली समुदायसँगको अन्तरक्रिया भने सम्पन्न भएको छ । नेपाली समुदायको बढ्दो विरोधका कारण पत्नी हिसिला यमी सहित एक महिना लामो अमेरिका भ्रमणमा आएका भट्टराईको अमेरिका बसाइ सहज नहुने देखिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस डा भट्टराईको भ्रमणले एनआरएनए अमेरिका बिवादको भुमरीमा
तस्बिर: ओम भट्टराईको फेसबुकवालबाट
३१ भाद्र २०७५, आईतवार ००:४३ मा प्रकाशित
न्युयोर्क । न्युयोर्क स्थित क्वीनस स्कूलमा एउटा अनौठो घटना घटेको छ । सुन्दा सामान्य लाग्ने घटना भए पनि यसका जोखिका बारेमा विश्लेषण गर्दा यो सवै अभिभावका लागि निकै पिडादायी एवम भयंकरको घटना मान्न सकिन्छ.....
समाचार टिप्पणी बद्रि गौतम, दूरबिन नेपाल, न्युयोर्क यतिबेला अमेरिकी राजनीतिमा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको.....
दूरबिन नेपाल, न्युयोर्क पछिल्लो समय न्युयोर्कका प्रहरीमाथी हत्या प्रयास तथा अभद्र व्यवहार भएपनि त्यसको.....
Categories Select Category Breaking News (2,803) English (56) Slider (1,212) अन्तर्वार्ता (11) अमेरिका समाचार (827) अर्थ/वाणिज्य (647) आजको छापाबाट (67) आप्रबास मामिला (213) एनआरएन विशेष (206) कला/मनोरन्जन (293) खेलकुद (960) ट्रेन्डिंग न्यूज् (3,018) प्रवास (559) फिचर (911) फेसबुक लाईभ (1) बिचार / ब्लग (1,591) बिज्ञान प्रबिधि (46) बिबिध (779) भिडियो न्यूज़ (35) मुख्य समाचार (5,400) यात्रा संस्मरण (13) राजनीति (2,230) रोचक (99) विद्यार्थी बिशेष (43) विश्व समाचार (1,566) सफलताको कथा (38) समाचार (3,634) सम्पादकीय (4) साहित्य (141) स्वास्थ्य / शिक्षा (533)